Booliska Nairobi oo xiray 5 ruux oo loo heysto dhimashada qof ajnabi ah | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Booliska Nairobi oo xiray 5 ruux oo loo heysto dhimashada qof ajnabi ah
Ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada tan Nairobi ayaa xabsiga u taxaabay 5 ruux oo lagu tuhunsanyahay in ay ku lug leeyihiin dil loo geystay qof ajnabi ah.
Ole Stenby, oo ah muwaadin 25 jir ah oo u dhashay wadanka Norway ayaa ku dhintay guriga saaxiibkiis oo ku yaalla xaafada Zimmerman ee magaalada tan Nairobi.
Ninkaan ayaa dhintay saacado yar ka hor xili lagu waday inuu axadii shalay ka dhoofo dalka, si uu ugu noqdo wadankiisa Norway.
Wararka ayaa sheegaya in Mr Stenby uu Kenya ku sugnaa ilaa 21-ki bishii September ee lasoo dhaafay.
Taliyaha booliska xaafada Kasarani Robinson Mboloi ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka loo xiray arrintaan uu sheegay in muwaadinka Norway ee dhintay ay is yaqaaneen mudo 2 sano ah.
Mr Mboi ayaa sheegay in booliska oo baaritaano xoog leh ku haya dhacdadaan ay sidoo kale ugaar sanayaan qof kale oo haweeney ah oo la tuhunsanyahay.
Dadka loo xiray arrintaan ayaa wali lagu wadaa su’aalo ku saabsan sababaha keenay dhimashada ninka ajnabiga ah.